बच्चन भन्छन : ‘मेरो मृत्युपछि मेरो सम्पत्ति यसरी बाँड्नु है’ – Khabar Silo
एजेन्सी । शताब्दी कै महानायक अमिताभ बच्चन चर्चित रियालीटी शो ‘कौन बनेगा करोडपती’ को ११ औं श्रृङ्खलामा देखा परेका छन् । उक्त शो अगस्ट १९ बाट प्रदर्शनमा आएको छ । यसका साथै उनले आफ्नो बिमारीलाई लिएर आफ्नो व्यहोराको बारेमा पनि बताएका छन् ।
आउँदै गरेको अर्को भागमा उनले आफ्नो मृत्युपछि आफूसँग रहेको सम्पत्ती कसरी बाँडिनेछ भनेर खुलासा गरेका छन् । मिडिया रिपोर्ट अनुसार उनिसँग ४६० करोड रुपैया रहेको छ ।
उनले शो मा बताएका छन्, ‘जब हामी हुँदैनौं तब धेरै थोरै रहेको सम्पत्ती हाम्रो सन्तानको हो । हाम्रा एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्, दुवैलाई बराबर बाँडिनेछ ।’ अमिताभले हालसालै अर्को खुलासा पनि गरेका थिए, उनी कलेजोको २५ प्रतिशत मात्र सहायताले बाँचिरहेका छन्।
अमिताभ बच्चनले कुनै समय यी अभिनेत्रीकाे जुत्ता उठाएका थिए
भाद्र २०, भारत । अमिताभ बच्चनलाई बलिउडका महानायक भनिन्छ र उनका करोडौं प्रशंसक छन् तर के तपाईंलाई थाहा छ ? अमिताभ बच्चन कसका प्रशंसक हुन् ? हालै सिंगिंग रियालिटी शो सुपरस्टार सिंगरमा अमिताभले आफू नायिका वहिदा रहमानमा निकै ठूलो प्रशंसक भएको खुलासा गरेका छन् । यतिबेला अमिताभले उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराको खुलासा गरे ।
यस्तै, अमिताभ बच्चनले वहिदा रहमान र आफ्नो परिवारसँग जोडिएको एउटा वास्तविकताबारे खुलासा गरे । उनले भने, ‘म वहिदाजीसँग जोडिएको एक रोचक तथ्य सेयर गर्न चाहन्छु । वहिदा जीले मेरो परिवारका तीन व्यक्तिसँग काम गरेकी छिन् र उनले ती सबैको आमाको भूमिका निभाएकी छिन् । फोगुन (सन् १९७३) मा उनले मेरी श्रीमती जया बच्चन, ओम जय जगदीश (सन् २००२) मा अभिषेक बच्चन र त्रिशुल (सन् १९७८) मा मेरी आमाको भूमिका निभाएकी थिइन् ।’ एजेन्सी
काठमान्डौ , हालै बलिउडका चर्चित र्यापर ‘बादशाह’को कार दु’र्घटना भएको छ। यस खबरले उनका प्रशंसकहरु निकै नि’राश भएका छन्। यस दु’र्घटना, पंजाबको लुधियानामा भएको थियो। दु’र्घटनामा बादशाहलाई हल्का चो’टपटक लागेको छ। श्रोतका अनुसार, सडकमा अ’त्यधिक कुहिरोका कारण ३६ वटा सवारी एक साथ दु’र्घटना भएको थियो। यस दु’र्घटना पंजाबको सिरहिंदबाट दिल्लीतर्फ जाने नैशनल हाइवेमा भएको थियो। […]